Farmaajo oo u ambabaxay Burundi xilli uu taagan yahay Khilaafka Kenya
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Burundi, kaddib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay dhiggiisa dalkaas.
Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha dalka Burundi Mudane Pierre Nkurunziza ayaa ka wada hadli doona xoojinta iyo horumarinta xiriirka labada dowladood iyo sare u qaadidda iskaashiga dhinaca nabadgelyada.
Burundi waxay ka mid tahay waddamada dadaalka ku bixiya nabadaynta iyo xasilinta Soomaaliya, waxaana ciidankoodu qayb ka yahay Ciidamada Nabad Ilaalinta ee AMISOM.
Wafdiga qaybta ka ah booqashada Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya ayaa kulamo lagu lafo-gurayo adkaynta wada shaqaynta ka dhexaysa labada dal iyo danaha ay wadaagaan waxa ay la yeelan doonaan dhiggooda dalka Burundi.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go’an dib u xoojinta xiriirka ay la leedahay dalalka Afrika, si ay isaga kaashadaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wadaagaan, isuna weydaarsadaan khibradda muhiimka u ah horumarka iyo dowlad-dhiska.
Dowladda Ingiriiska oo Safiir cusub usoo magacawday Somalia
Caalamka 30.01.2019. 16:24
Bixinta Baasaboorka Somalia oo 3 bilood hakad ku jira [Shacabka oo cabanaya]
Soomaliya 03.02.2019. 10:45
Wafdi ka socda dowladda Somalia oo loo diiday inay tagaan Garowe
Soomaliya 06.01.2019. 16:47
Khayre oo u dhoofay Geneva iyo madaxda DF oo kordhiyay safarada dibadda
Soomaliya 03.03.2019. 12:22
Villa Soomaaliya oo fahfaahisay shirka Farmaajo iyo madaxda Ahlu Sunna 18.09.2019. 07:05
Madaxtooyadda oo ka hadashay kulanka safiirka Soomaaliya iyo Trump 18.09.2019. 07:00
Xisbiyo walaac ka muujiyey war-murtiyeedkii shirka Galmudug 17.09.2019. 22:50
Angola oo DF ku wareejisay warbixinta baarista qaraxii Daallo Airline 17.09.2019. 22:30
Qodobada ugu mudan khudbadii Deni ee xiritaanka Shirka Maalgeshiga 17.09.2019. 20:55
Afhayeenka Golaha Shacabka oo casuumaad u fidiyey dhigiisa Turkiga 17.09.2019. 18:29